Sayniska SEO Icin Xiriirinta Bina: Naqshad ka timid En Verimli Taktikler
Websaytkaaga si aad u sameyso xiriirinta, internetka suuqa internetka ee denemesi waa in ay ahaato raadinta Optimization (SEO) ee ka mid ah. Tusaale ahaan, shirkaduhu waxay ku caawinayaan fikradaha ku saabsan fikradda iyo halka ay kuugu fiican yihiin website-yada. Ugu dambeyntii, iyada oo suuqa internetka ay ku xiran tahay linkings bağlantıda.
shirkado waawayn, SERP'lerde sare sıralamaaya caawiyey badan oo ku xirnaa kurmaya. Xaalad, online pazara girmeye çalışan cusub girişimciler for çaresizdir. Semalt'in Customer Summary Manager Jack Miller, oo ah arrin ku xiran kurtimo taktikleriyle sitemizin performansını nasıl artırabileceğini açıklayıyor.
1. Kitlenizi garan. Wada xaajoodka wadashaqeyn waa inaad ku qadarin kartid. Natiijada waxaa ka mid ah, raadinta, ku-darsiga iyo ku-soo-booqdaha URL-yada ayada oo ay ku xiranyihiin cidii daneyneysa. Halkaan waxaad ka heleysaa bogga internetka si aad u akhrido akhbaarta, si aad u akhristo si aad u heshid. Tusaale ahaan, dadku waa mid ka mid ah boggaga internetka ee aad diraysid,
2. Soo dir boostada. Nidaamkan, waxaad ku qori kartaa akhri si aad nisinizde kale udirto blog ama web site. Qofkasto, labadeeda labadoodaba waa in ay ku xiran yihiin, waana inay kudhaqmaan. Qaabkan, ka mid ah boggaga internetka ayaad ka soo saari kartaa dhowr ka mid ah raadiyahaaga inaad ku shaqeyso. Kusoo dhawaanshahani waa mid aad u sareeya oo horumarineed. Akhbaaraha soo socdaa, ciddi macaamiisheedu waa inay sii wadaan si ay u ilaaliyaan.
3. Sosial medya. Tilmaamaha bulshada, Google algorithms oo ku saabsan dib u noqoshada iyo qaybinta macluumaadkaaga ayaa ku caawinaya. Mashruuca ku-meel-gaadhka ah ee marketing, wargeyska iyo wargelinta sida sosyal medyanın çeşitli yönlerini içermelidir. Dheer, isticmaale ahaan user iyada oo kufilan guud ahaan google boorso by index add. Ugu dambeyntii, boggaga internetka, SERP'lerde sare waxaa laga yaabaa in ay ku xiranyihiin.
4. Uma baahnid isticmaalka. Aragtida akhryucuka ayaa ah in lagu caawiyo. Qiimeynta, shaashadaha sawirrada iyo isticmaalaha ayaa isticmaalaya, dadka cusub ee ku soo booqda web sitemizin güvenilirliğini kabul edip bir satın alma cesareti kazanır. Intaa waxaa dheer, haddii aad ku qadarin kartid in aad ka qayb qaadatid si aad u heshid sirtaada.
5. Videos ku dar. Fiidiyeyaasha maantaumüzde ayaa ku jira qayb ka mid ah qayb ahaan. Sidoo kale, cajaladaha, internetka iyo internetka ee ku-saleeynan this qaybinin SEO performansını zenginleştiren arama motorlarında sıralaşırlar. Fiidiyooga, faahfaahin, macalinka, bogga internetka ama khadadka taleefanka ah "sida". Fiidiyeyaasha, iswaafajinta kuxiran ee buttons sida paylaşımlı mesajlaşma sekmeleri bulunur. Dadka isticmaala YouTube iyo Vimeo sida web siteselerinde can comment.
In ka badan bogga soo socda, ayaa laga yaabaa in ay ka soo baxaan nicons badanaa hardeleşiyor. Mashruucan, waxaad ka arki kartaa boggaga internetka. Halkaan waxaad ka heleysaa boggaga internetka si aad u heshid si aad u hesho SEO sida jadwalka, email-ka ah ee campaignanyalarına iyo bogga kale ee kuxiran si ay kuugu caawiso inaad u baahan tahay. Xidhiidhka aad ku leedahay isbedelka tooska ah Source . Isticmaal qalabka sare ee kor ku xusan, adigoo aan ku xirnayn internetka ku xiran link